Huawei က Honor:7ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: လျှပ်စစ်ပြက်-အစာရှောင် fingerprint ကို scanner ကိုအတူ-range ကိုအစိုင်အခဲလယ်ပိုင်း - သတင်း Rule
အဆိုပါဂုဏ်7အချို့အလွန်ကြီးစွာသော features တွေနှင့်အတူအစိုင်အခဲတဲ့ mid-range စမတ်ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါလက်ဗွေရာအာရုံခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အလျင်မြန်ဆုံးဖြစ်ပါသည် - အားလုံးလက်ဗွေအာရုံခံလွယ်ကူမြန်ဆန်သုံးစွဲဖို့ကဖြစ်သင့်.
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Huawei က Honor:7ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: လျှပ်စစ်ပြက်-အစာရှောင် fingerprint ကို scanner ကိုအတူ-range ကိုအစိုင်အခဲလယ်ပိုင်း” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 27 သြဂုတ်လအပေါ်များအတွက် 2015 16.15 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Huawei ၏ဂုဏ်အဘို့အတိုချုပ်7ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: ဘဏ်ကိုချိုးဖျက်မယ့်အစိုင်အခဲစမတ်ဖုန်းလုပ်.
ဒါဟာ "စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်လူသတ်သမား" ဖွဟန်ဆောင်မထားဘူး, နှင့်မဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်အောက်မှာ£ 250 အဘို့ကောင်းသောဟာယပူဇော်သက္ကာနှင့်ပြည့်ဝ၏တစ်ဈေးကွက်ထဲမှာ, သစ်အပါအဝင် OnePlus2နှင့် တတိယမျိုးဆက် Moto G, အနိုင်, ငြင်းခုံဖွယ်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အလျင်မြန်ဆုံးလက်ဗွေစကင်နာကထွက်မတ်တပ်ရပ်ပါစေ?
တစ်ဦးကအလွန်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ထိရောက်သောလက်ဗွေအာရုံခံနောက်ကျောအပေါ်ကင်မရာအောက်မှာရှိနေပါမယ်, သင့်ရဲ့အညွှန်းကိန်းကိုလက်ညှိုးထိုင်ဘယ်မှာနှင့်အညီ၌တရား. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါဂုဏ်7ရိုးရှင်းတဲ့ရှိပါတယ်, အတော်လေးဆွဲဆောင်မှုဒီဇိုင်း. အလောင်းကိုသတ္တုဖြစ်ပါသည်, အဲဒါကိုတစ်ဦးပရီမီယံပလပ်စတစ်ကဲ့သို့ခံစားပေးသည်ကြောင့်အပေါ်တစ်ဦးအပေါ်ယံပိုင်းရှိပါတယ်ပေမယ့်. ရှေ့တစ် selfie cam နဲ့ရှေ့-face flash ကိုအတူအားလုံးဖန်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါနောက်ဘက်ထွက်ကပ်တတ်ကြောင်းကင်မရာနှင့်အောက်လက်ဗွေစကင်နာရှိတယ် - ဒါကြောင့်အားလုံးအတော်လေး understeer င်.
Build အရည်အသွေးအဖွင့်ပျမ်းမျှအားအထက်ဖြစ်ပါတယ်: လိမ်သည့်အခါကိုယ်ခန္ဓာ flexes နှင့်ကျဆင်းသွားလျှင်သူတို့အလွယ်တကူမှတ်သားပါလိမ့်မည်ကဲ့သို့ပလပ်စတစ်ထိပ်ဖျားနဲ့အောက်ဆုံးထောင့်ခံစားရ.
အဆိုပါ 5.2in ကို full HD Screen ကိုသိသိသာသာကြည်လင်ပြတ်သားစွာနှင့်ကောင်းမွန်သောကြည့်, ဒါပေမဲ့ side-by-side သည့် quad HD ကိုဖန်သားပြင်နှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောက Galaxy S6 ၏ 5.1in screen ကိုအဖြစ်ပိုမိုမြင့်မား pixel သိပ်သည်းဆနှင့်အတူကသိသာလျော့နည်းသိပ်သည်းသည်.
အဆိုပါဂုဏ်7အမှလိုလိုလားလားနှိုင်းယှဉ် OnePlus 2, သောအလားတူ 1080p မျက်နှာပြင်ရှိပါတယ်.
8.5mm မှာဖုန်းလယ်ပိုင်းအကွာအဝေးစျေးနှုန်းအတော်လေးပါးလွှာနှင့်အလင်းဖြစ်၏. အ OnePlus နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်2ဥပမာအားဖြင့်, က 1.35mm ပိုမိုပါးလွှာခြင်းနှင့် 18g ပိုမိုပေါ့ပါးသည်.
စံအာဏာနှင့်အသံအတိုးအကျယ်ခလုတ် ကျော်လွန်., ထိုဂုဏ်7လည်းတစ်ဦးအပိုဆောင်းစိတ်ကြိုက်ခလုတ်ကိုရှိပါတယ်. တစ်ဦးကအတိုသတင်းစာ, ရှည်လျားသတင်းစာနှင့်နှစ်ဆစာနယ်ဇင်းအားလုံးထိုကဲ့သို့သောကင်မရာစတင်အဖြစ်ထုံးစံလုပ်ရပ်မှချည်ထားသောသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောတွစ်တာသို့မဟုတ် Facebook ကဲ့သို့သော app တစ်ခုဖွင့်လှစ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်. ဒါဟာကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်, ထိုသို့တန်ခိုးတော်နှင့်အသံအတိုးအကျယ်ခလုတ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သကဲ့သို့ဒါပေမဲ့မတော်တဆအတော်လေးတွေအများကြီးဖိရရှိ.
processor: octa-core ကို Huawei က Kirin 935
ကင်မရာကို: 20လွှတ်တော်အမတ်နောက်ဘက်ကင်မရာက, 8အမတ် front-facing ကင်မရာကို
connectivity ကို: dual-sim, LTE ကို, ဝိုင်ဖိုင်, NFC ကို, ဘလူးတုသ် 4.1 နဲ့ GPS
ဒိုင်မန်းရှင်း: 143.2 x က 71.9 x က 8.5mm
အဆိုပါဂုဏ်7ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအပေါ်အမြန်ဆုံးစမတ်ဖုန်းမဟုတ်, ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ် processor ကိုပြဿနာမရှိဘဲအများဆုံးတာဝန်များကိုဖျော်ဖြေနိုင်စွမ်း. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါဂုဏ်7Huawei ၏ Kirin ပါရှိသည် 935 Octa-core processor ​​ကို. Perfomance အစိုင်အခဲသည်, အကယ်. မအံ့ဖှယျ, သာအချို့သောသူ့ကို graphically ကြွယ်ဝသောဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်အတူအနည်းငယ် stuttering, RAM ကို 3GB built-in RAM ကိုမော်နီတာအညီ multitasking များအတွက်ပဒေသာနေစဉ်.
အဆိုပါဖုန်းကိုငါပြဿနာမပါဘဲမှာပစ်ချအရာအားလုံးကိုင်တွယ်, နှင့်မဆိုအပူကိစ္စများမှမခံစားခဲ့, Qualcomm ရဲ့ Snapdragon မတူဘဲ 810.
ဘက်ထရီဖုန်းရဲ့ "စမတ်" တန်ခိုးပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်တနေ့ပတ်ပတ်လည်ကြာမြင့်, သောဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့်အတူအကောင်းဆုံးချိန်ခွင်လျှာစွမ်းဆောင်ရည်ဆို, အတူညဥ့်အခါမှာအားသွင်းရန်ပြန်လာသော 20% ဘက်ထရီလက်ဝဲ. ဒါကတွန်းအားပေးအကြောင်းကြားစာများရာနှင့်ချီနှင့်အတူရှိ၏, အီးမေးလ်က, တွစ်တာ, Facebook က, ဂီတ streaming များနှင့်ကြည့်ရှုခြင်း၏တစ်နာရီ.
ဒါဟာမျက်နှာပြင်ရဲ့ကြောင်းသတိပြုရကျိုးနပ်မယ့် 50% ရောင်ခြည်တစုံတခုကိုမြင်ဖို့ဝေးလွန်းမှိန်ခဲ့, နှင့်အလိုအလျောက်ရောင်ခြည် setting ကိုမကြာခဏမျက်နှာပြင်အတော်လေးတောက်တောက်လုပ်, ဘက်ထရီအသက်ရှင်ခြင်းသို့စားရလိမ့်မည်သည့်.
မခြစ်ရာမှတက်စိတ်လှုပ်ရှားမှု UI ကို
ဟွာဝေး ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါဂုဏ်7အန်းဒရွိုက်၏ Huawei ၏ပြုပြင်ထားသောဗားရှင်းပြေး 5.0 "Emotion UI ကို" ဟုခေါ်. ဒါဟာအပေါ်ပြေးကဲ့သို့တူညီသောဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ် ဟွာဝေး P8 နှင့်အတူတူပင်အကျိုးခံစားခွင့်နှင့်ထောငျခြောကျရှိပါတယ်.
တိုစွာ, အိမ်တွင် screen ပေါ်မှာရှိသမျှသော app ကိုအတူတစ်ဦးကို iPhone ကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းမရှိ app ကိုအံဆွဲရှိပါတယ်; ထိုအကြောင်းကြားစာဗန်းနှင့်ဆင်တူပြီးမျိုးစုံအကြောင်းကြားစာများထွက်တံထှေးနှငျ့ထှေးတချို့ apps များနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားပြုမူ; အများဆုံး app ကို icon တွေကိုတစ်ရောင်စုံနောက်ခံများ, တစ်ဦးရှုပ်ထွေးကြည့်ရာ, နှင့်အခြား app များကိုထုံးစံ icon များရှိ, နည်းနည်းအတိုင်ကြည့်ရှုရာ, ထိုကဲ့သို့သော Instagram ကိုအဖြစ်.
အဆိုပါစံ Android Lollipop အတှေ့အကွုံအများကြီးပိုဆွဲဆောင်မှုနှင့် slick ဖြစ်ပါသည်.
Emotion UI ကိုအကြောင်းပိုမိုအသေးစိတ်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး အဟွာဝေး P8 ပြန်လည်သုံးသပ်၏ဆော့ဖ်ဝဲကိုအပိုင်း.
ကင်မရာ app ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ခံစားအတွက် iPhone ရဲ့ကင်မရာကိုလျှောက်လွှာဆင်တူသည်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါဂုဏ်7အရာနောက်ကျောနှင့် 8-megapixel ကင်မရာသတ်မှတ်ထားတဲ့-focus selfie cam အပေါ်တစ်ဦး 20-megapixel ကင်မရာနှင့်အတူကြွလာ, ပုံမှန်မဟုတ်, ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် flash ကိုဟန်းဆက်ရဲ့စကားကိုနားထောငျစပီ၏အခြားဘက်ခြမ်းအပေါ်ထားရှိခဲ့သည်.
နောက်ဘက်ကင်မရာကိုမှ Images ကိုအရောင်ထဲမှာအသေးစိတ်ကြွယ်ဝသောနှင့်အတော်လေးတိကျမှုရှိပါတယ်. အဆိုပါ,f/ 2.4 မှန်ဘီလူးအတော်လေးစက်မှုလုပ်ငန်းမှာအကောင်းဆုံးနှင့်အတူတန်းတူတက်မဖြစ်, LG ကနှင့် Samsung ကနေသူတို့ရဲ့နှင့်အတူ 1.9 နှင့် 2.0 မျက်ကပ်မှန်, သောရေတိမ်ပိုင်းလယ်နက်ရှိုင်းမှုနှင့်နှစ်သက်ဆိုလိုသည် bokeh အကျိုးသက်ရောက်မှု ရရှိရန်ခက်ခဲသည်.
ယေဘုယျအား, ထိုသို့ကောင်းသောအနိမ့်အလင်းစွမ်းဆောင်မှုနှင့်အတူတစ်လျောက်ပတ်သောကင်မရာကိုဖွင့်, ၏အကြိုက်နှင့်အတူတန်းတူအပေါ် OnePlus 2.
အဆိုပါ front-facing ကင်မရာကကောင်းသောရုပ်တုဆင်းတုယူနိုင်ပေမယ်အထိကင်းမဲ့နှင့်, အာရုံ fixed ခံရ, 8-megapixel ကင်မရာတစ်ခုစပ်စုရွေးချယ်မှု. ဒါဟာအရာအားလုံးအာရုံတက်အဆုံးသတ်ဆိုလိုသည် - သို့မဟုတ်, သငျသညျနီးကပ်လွန်းရလျှင်, အဘယ်အရာကိုမျှအာရုံ၌တည်ရှိ၏. အဆိုပါ LED flash လည်းအလွန်တောက်ပတဲ့မဟုတ်ပါဘူး.
ကင်မရာ app ကိုအရမ်းရဲ့ iPhone-ကဲ့သို့ဖြစ်၏. လက်ဝဲဘက်တစ်ဦးကရိုးရှင်းတဲ့ဓာတ်ပုံ selector, HDR နှင့်တစ်ဦး menu ကိုနောက်ကွယ်မှသင်ျဂွိုဟျအခြား features တွေကိုတစ်ဝန်ကို enable ရွေးချယ်စရာနှင့်အတူ. ဒါဟာတခါတရံဓါတ်ပုံကိုယူတစ်နည်းနည်းနှေးကွေးစေနိုင်ပါတယ်. အဆိုပါကင်မရာရဲ့အလှတရားသည် Modes လည်းအချို့သောကြောက်စရာဖျော့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်, bug ကို-eyed ဓာတ်ပုံများ.
တစ်ဦးလက်ညှိုးနှင့်အတူနောက်ကျောလိုင်းများပေါ်တွင်လက်ဗွေရာကိုတက်မျက်နှာပြင် facing ကကိုင်ဆောင်သည့်အခါ, ဒါပေမယ့်လည်းနောက်ဘက်မှနှိုးစက်သို့မဟုတ်အခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာနှုတ်ပိတ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
စျေးကွက်အပေါ်ငြင်းခုံဖွယ်အကောင်းဆုံးအလက်ဗွေစကင်နာ, နှင့်ဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကောင်းဆုံးအရာ 7, နောက်ကျောအပေါ်ရုံကင်မရာအောက်က sensor ကိုသင်ကချိုးဖဲ့င်ထင်ဒါကြောင့်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့တိကျမှန်ကန်သည်.
ဒါဟာသင့်ရဲ့အညွှန်းကိန်းကိုလက်ညှိုးနှင့်ဝင်တိုက်ဖို့လွယ်ကူရဲ့အောက်မှာအတွက်ဖုန်းကိုသော့ဖွင့် 0.5 စက္ကန့်. ရိုးရိုးအသာပုတ်လုံလောက်သည် - ဘယ်သူမျှမကြာမြင့်စွာနှိပ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်. သူကတောင်ပိုမြန်ပြီးပိုတိကျမှန်ကန်အိုင်ဖုန်းပေါ်တွင် Apple ရဲ့တာအပါအဝငျကွှားဝါထိ ID ကိုထက်ရဲ့.
ကံမကောင်းသဖြင့်, တူ OnePlus 2, ထိုဂုဏ်7ရဲ့လက်ဗွေရာအာရုံခံကိရိယာထိုကဲ့သို့သော Evernote သို့မဟုတ် LastPass အဖြစ် Third-party apps များအတွက်အသုံးပြုမရနိုငျ. Android မှာ6Marshmallow Android ထဲကိုဇာတိလက်ဗွေထောက်ခံမှုမိတ်ဆက်ပေးနဲ့မျှော်လင့်သည့်ဂုဏ်သည်အထောက်ခံမှုချဲ့ထွင်လိမ့်မည်7နှင့်အခြားစမတ်ဖုန်းများ '' လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ, Samsung ရဲ့ထက်ကျော်လွန်.
အဆိုပါဂုဏ်7£ 250 များအတွက် Huawei ၏အွန်လိုင်းစတိုးကနေတဆင့်ရရှိနိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်, အရာထက်က£ 10 ကပိုစျေးကြီးစေသည် 16GB ကို OnePlus 2. နှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးသည်အ 32GB အထိ Samsung က Galaxy S6 £ 415 ကုန်ကျနှင့် LG က G4 £ 340 ကုန်ကျ. Huawei ၏ P8 £ 360 ကုန်ကျ.
အဆိုပါဂုဏ်7တစ်ဦး 5.2in screen ကိုအတူတစ်စမတ်ဖုန်းများအတွက်အတော်လေးစီမံခန့်ခွဲသည်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ကင်မရာကအစိုင်အခဲသည်, က Dual-sim သို့မဟုတ် microSD ကဒ်ထောက်ခံမှုရှိပါတယ်, နှင့်အပိုစိတ်ကြိုက်ခလုတ်ကိုanice ထိဖြစ်ပါသည်.
၎င်း၏အကြီးမားဆုံးပြဿနာက၎င်း၏ဆော့ဝဲဖြစ်ပါသည်. Emotion UI ကိုနည်းတူဆွဲဆောင်မှုမဟုတ်ပါဘူး, အသုံးပြုသူဖော်ရွေသို့မဟုတ်ကောင်းစွာစံက Android အဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ5Lollipop အတှေ့အကွုံ.
ယေဘုယျအား, ထိုဂုဏ်7တစ်ဦးထက်ပိုခေတ်ရေစီးကြောင်းတရုတ်စမတ်ဖုန်းအမှတ်တံဆိပ်မှကောင်းသောတန်ဖိုးကိုဖြစ်ပါသည်, သင်အမှန်တကယ်တစ်စတိုးကနေဝယ်, ဒါပေမဲ့တစ်ဦးအစိုင်အခဲဘတ်ဂျက်ရာပူဇော်သက္ကာဘို့ထက်£ 100 ကိုပိုပြီးဖြုန်းတရားမျှတရန်လုံလောက်သောမဖြစ်စေခြင်းငှါ.
အကောင်းအဆိုး: စိတ်ကူးလက်ဗွေစကင်နာ, အစိုင်အခဲကိုကင်မရာ, လျောက်ပတ်သောမျက်နှာပြင်, microSD card slot, အမြန်တာဝန်ခံ, လျောက်ပတ်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကို, အဘယ်သူမျှမအပူကိစ္စများ
Cons: အဘယ်သူမျှမကိုကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်, Emotion UI ကိုမကောင်းမသင့်ဖြစ်၏, selfie cam သတ်မှတ်ထားတဲ့အာရုံဖြစ်ပါတယ်, တည်ဆောက်ရညျအသှေးအခြို့သောပြိုင်ဘက်အဖြစ်မကောင်းမသင့်ဖြစ်၏, ဒုတိယ sim သာ 2G
• OnePlus2ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: တကယ့် '' စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်လူသတ်သမား ''?
• Google ၏ Nexus6ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: ကြီးမားသောအဆင်းလှသောအစ်မဖြစ်, ဒါပေမယ့်စီမံခန့်ခွဲမ
• Apple က iPhone ကို6ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: ပါးလွှာ, ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးအနည်းငယ်စျေးသက်သာ
← ငါစဉ်းစားတယ်ဘာကိုစဉ်းစားကြသည်? စိတ်ကိုထိန်းချုပ်မြင့်တက် လူသားသည်ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး pentacontakaitetracopter အတွက်မိုဃ်းတိမ်မှကြာ →